अविरल परेको बर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो, कुन कुन ठाँउमा क्षति पुर्यायो ? - समय-समाचार
अविरल परेको बर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो, कुन कुन ठाँउमा क्षति पुर्यायो ?
काठमाडौं, असोज ८ । मुलुकभर अहिले अधिकांस स्थानमा बर्षा भइरहेको छ ।
आज र भोलि धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने र एक र दुई ठाउँमा निकै ठूलो पानी पर्ने मौसमविद्ले बताएका छन् ।
भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र उत्तर पूर्व सरिरहेकाले नेपालका विभिन्न ठाउँमा ठूलो पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
यसकै प्रभावले अस्ति बेलुकीदेखि नै झरी परेको महाशाखाकी मौसमविद्को भनाइ छ ।
मौसम विभागका अनुसार आज र भोलि देशभरिकै मौसम एकैछिन खुले पनि फेरि पानी परिहाल्नेछ ।
अहिले पनि प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका एकरदुई ठाउँमा निकै ठूलो पानी परिरहेको छ भने अरु ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम विभागले बताएको छ ।
पर्सि दिउँसोसम्म नै धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने र केही ठाउँमा निकै ठूलो पानी पर्ने भएकाले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम छ ।
यस्तै आज परेको अविरल वर्षाका कारण स्याङ्जा, पाल्पा, चितवन मुग्लीन सडक खन्ड लगाएका स्थानमा गएको पहिरोले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई असर पारेको छ ।
स्याङ्जामा पहिरोका कारण ८ जना बेपत्ता
स्याङ्जामा पहिरोले घर पुर्दा कम्तीमा ८ जना बेपत्ता भएका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ तमादीमा पहिरोले एक घर पुर्दा कम्तीमा ८ जना बेपत्ता भएका हुन्।
एकजनाको शव भेटिएको र एक जनालाई घाइते अवस्थामा उद्दार गरी अस्पताल लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले बेपत्ताहरुको खोजी गरिरहेको छ।
घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। यस्तै स्याङ्जाकै कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ विर्घामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कालीगण्डकी गाउँपालिका ४ बिर्घास्थित गौतमटोलका १७ वर्षीय विष्णु परियार रहेको स्थानीय नेकपाका वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
पाल्पा स् पाल्पामा पहिरोले पुरिएर बिहिवार ६ जना बेपत्ता भएका छन्। रम्भा गाउँपालिका २ फोक्सिङकोटस्थित बेलङ्जाका हुमबहादुर गाहा र मन बहादुर गाहाको घर पुरिएको हो। हुमबहादुर गाहा उनकी श्रीमती धनिसरा गाहा, छोरी कृष्णा गाहा, नातिनिहरू आशिका गाहा र खुमिसरा गाहा बेपत्ता भएको वडाध्यक्ष उमानसिह सारूले बताए। उनकाअनुसार बिहान करिब ४ बजे पहिरोले पुरिएका हुन्।
तिन दिनदेखि परेको अविरल वर्षासँगै घरमाथिबाट आएको पहिरोले उनिहरू पुरिएका हुन्। अहिले स्थानीयले उद्दार गरिरहेका छन्। घटनास्थल सदरमुकामभन्दा टाढा र विकट भएकाले सुरक्षाकर्मी पुग्न कठिन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए।